आजको राशिफल बि.सं.२०७७ साल असार १४ गते आइतबार – Hamrai Sajha Patrika
By संवाददाता	 On २०७७, १४ असार आईतवार ०८:०८
आजको राशिफल बि.सं. २०७७ साल असार १४ गते आइतबार
आजको राशिफल बि.सं.२०७७ साल असार १४ गते आइतबार ई. सं. २०२० जुन २८, नेपाल सम्बत ११४० दिल्लाथ्व अष्टमी प्रमाधि नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायन, गिष्म ऋतु, असार शुक्ल अष्टमी, चन्द्रमा कन्या राशिमा, उतरफाल्गुनी नक्षत्र, वरियन योग, विष्टि करण । नेपालमा सूर्योदय बिहान ०५ः११ बजे, सूर्यास्त साँझ ७ ः ४ बजे हुनेछ । आज जन्म लिने बच्चाको कन्या राशि हुनेछ । आज महत्वपूर्ण कार्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा घिउ खाएर जुनसकै दिशाको यात्रा गरेपनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ । कुनै महत्वपूर्ण कार्यको शुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कन आजका लागि शुभ समय बिहान ८ बजेर ३९ मिनेट देखि १२ बजेर ८ मिनेट सम्म छ । यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्षत्र, ईत्यादीमा पनि अन्तर हुनेछ ।
बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ । सन्तान वा अनुयायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन । विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ । सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिने छ।
आत्मबल दह्रो बनाउनु पर्छ, सोचेको काममा विजय प्राप्त हुनेछ । विगतमा दिएको वचन पूरा गरिने छ । कुनै महत्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन गर्न गोपनीय बाटोमा हिंड्नु राम्रो हुनेछ । पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ हुनेछ । परिवारमा आमाको माध्यमबाट काम बन्न सक्छ । टाढिएका साथीभाइ नजिकिने छन। पारिवारिक भेटघाटको समय छ ।
नयाँ काममा हात हाल्नु केही समय पर्खंदा राम्रो हुनेछ । गरी आएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिने छ । आश्वासन दिएर झुक्याउनेहरूले सताउनेछन, गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला । सवारीमा सावधानी अपनाउनुहोला । लेनदेनको विवादले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ । हुलमुलमा धनमाल हराउन सक्छ, सचेत रहनुहोला ।
संसद धामीको पहलमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ मा विपन्न समुदायकाको लागि सुरक्षीत आवास कार्यक्रम लागू हुँदै । २०७७, १४ असार आईतवार ०८:०८
हुलाकी सडक प्रकरण: सिमामा पहरेदार भएर सडक निर्माण सम्पन्न गराउँछौ- पुर्व मन्त्री लाल बहादुर विश्वकर्मा २०७७, १४ असार आईतवार ०८:०८
मातृभूमि रक्षाका लागि एकै दिन कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीका ‘चार बिओपी’ स्थापना । २०७७, १४ असार आईतवार ०८:०८
नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोकियो २०७७, १४ असार आईतवार ०८:०८
भारतको वकालत गर्ने सरिता गिरीको सांसद पद चैट । २०७७, १४ असार आईतवार ०८:०८